पार्लरमा धेरै पैसा खर्च भैरहेको छ भने अब यसरी गरौं ५ मिनेटमै मेकअपः पार्लर धाइरहनु पर्दैन ! – mero sathi tv
पार्लरमा धेरै पैसा खर्च भैरहेको छ भने अब यसरी गरौं ५ मिनेटमै मेकअपः पार्लर धाइरहनु पर्दैन !
On २४ चैत्र २०७४, शनिबार ११:३३
पाउडरको तुलनामा क्रिम आइस्याडो तथा क्रिम ब्लस अनले आँखा र गालाको छाला बढी सुख्खा देखिने बनाउँछ । केही समयपछि आँखाको छालामा सुख्खा धब्बा एवं गालामा चाउरी देखाइदिनसक्छ । यस्तोमा लाइट पाउडर एवं पाउडर ब्लसअन प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
-पार्टी मेकअपका लागि लिपस्टिक तथा आखाको डिटेलिङमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । गर्मी मौसममा बेलुकाको पार्टीमा जानु छ भने लिक्विड वा वाटरप्रुफ मेकअप गर्नु राम्रो हुन्छ । अनुहारमा कम्प्याक पाउडर ब्लसर लगाउनुपर्छ । यसका साथै आँखामा आइलाइनर नलगाई क्रिमबेस्ड आइस्याडो लगाउनुपर्छ । परेला चम्काउनका लागि क्यास्टर आयल प्रयोग गर्नुपर्छ ।
गान्धीको समाधिस्थल पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो लेखे, जुन कुरा भारतीय मिडियामा भाइरल बन्यो
पेटभित्रको बच्चीको मार्मिक आत्मकथा (यो पढेपछि सबैकाे मन रुन्छ)
बुद्धको पाईलाको फोटो जसले सेयर गर्छ उसलाई ७ दिन भित्रै निकै ठूलो खुसीको खबर प्राप्त…
नियमित मन्दिर जानुहोस्, यस्ता घातक रोगबाट बचिनेछ
विश्वको सबैभन्दा खुसी मुलुक फिनल्यान्ड,भारतभन्दा नेपाल अगाडि